Razer Blade Stealth နှင့် Razer Core V2 ဂိမ်းစက်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည် Gadget သတင်း
Razer Blade Stealth နှင့် Razer Core V2 သည်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်အဓိကကျသည်
မကြာသေးမီကကမ္ဘာအနှံ့ရှိဂိမ်းကဏ္ sector ကိုအများဆုံးအာရုံစိုက်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထုတ်ကုန်အသစ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သောကြောင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းပရိသတ်များကကံကောင်းသည်။ Razer.
ထိုအလောင်းအစားသည်က Razer Blade Stealth 2017 ၏ထုတ်ဝေမှုအသစ် (ယခင်ပုံစံ၏တိုးတက်လာသောမူကွဲ) နှင့် Razer Core V2, အမှတ်တံဆိပ်၏ပြင်ပ GPU ၏ဒုတိယမျိုးဆက်။
1 Razer Blade ကို Stealth 2017
Razer Blade ကို Stealth 2017
El Razer Blade ကို Stealth 2017 တစ်မူကွဲဖြစ်ပါတယ် quad core ဒီအချိန်ဟာစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားမည့်မူရင်းမော်ဒယ်ဖြစ်သည် 7th Generation Intel Core i8550-XNUMXU ပရိုဆက်ဆာနှင့်သူ၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ထားပြီးဘက်ထရီ။
၁၃ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်အရည်အသွေးကိုပေါင်းစပ်ထားသည့် Razer Blade Stealth 2017 တွင် Quad HD + 3200 x 1800 Pixel Resolution ဖြင့်ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သည် ၁၀၀% sRGB အရောင်ဖြင့် IGZO တို့ထိဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်။ ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာမြန်နှုန်းနဲ့လည်ပတ်နေပါတယ် Turbo Boost သည် 4GHz အထိရှိသည် အရာဖြင့်လိုက်ပါသွားသည် memory 16 GB dual-channel system memory, Razer ရဲ့ပြောကြားချက်အရ "multitasking အစွန်းရောက်" အတွက်အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ memory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Razer ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Min-Liang Tan က“ အင်ဂျင်နီယာတွေက Blade Stealth အသစ်နဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ပြီးပါဝါကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသစ် Blade ကိုကိုယ်ပျောက်ဖြစ်ပါတယ် အပြည့်စုံဆုံး Windows လက်တော့ပ်e နှင့် Razer Core V2 new ၏အကူအညီဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည်။
El Razer Core V2 အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ပြင်ပ GPU ဒုတိယမျိုးဆက်NVIDIA ၏ GeForce 10 စီးရီးနှင့် (XConnect နှင့်အတူ) AMD ၏ Radeon 500 စီးရီးများကဲ့သို့ GPU များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခု။ Razer Core V2 သည် GPU ကိုabuilt-in 500W ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ချိတ်ဆက် Laptop ကိုများအတွက်ဂရပ်ဖစ် processing စဉ် Thunderbolt3(က USB ကို C).
Razer Core V2 တွင်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုရှိပြီးဂရပ်ဖစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများအတွက်သီးခြားလိုင်းများရှိသည်။ USB 3.0 port လေးခုတစ်ခုတည်းအဖြစ် Gigabit Ethernet ဆိပ်ကမ်း။ ပြီးတော့စက်တစ်ခုလုံးကိုတိကျတဲ့ CNC ကြိတ်ခွဲထားသောအလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ပြင်သစ်၊ ကနေဒါ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျာမနီရှိ Razer အွန်လိုင်းစတိုးမှတစ်ဆင့် Razer Blade Stealth 2017 ကိုချက်ချင်းဒေါ်လာ ၁,၇၀၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ Razer Core V1700 သည်မကြာမီတွင်ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်ပြီး Razer အွန်လိုင်းစတိုးတွင်လည်းဒေါ်လာ ၅၀၀ ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Razer Blade Stealth နှင့် Razer Core V2 သည်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်အဓိကကျသည်
La Caixa နှင့် ImaginBank တို့သည် Apple Pay နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်